Isipho sakho siya kwenza umahluko
Umnikelo wakho unika isipho esiya kwandisa impembelelo yeMyuziyam ebantwaneni ekuhlaleni. Abaxhasi bethu basinceda sigcine kwaye sikhulise iinkonzo zethu zemfundo yabantwana abancinci kunye nenkqubo kumazantsi mpuma eNorth Carolina. Sikunye sinceda abantwana bafunde kwaye bakhule.
INgxowa-mali yethu yoNyaka
Siluluntu oluxhaswa yi-501 (c) (3) umbutho ongenzi nzuzo ozinikele ekufundiseni nasekukhuthazeni ukucinga, ukucinga okuzimeleyo ngokusebenzisa izandla kwisayensi, izibalo kunye namava obugcisa. Sixhomekeke kwiminikelo yakho yesisa ukugcina eso sithembiso. Nikela kwiphulo lethu leNgxowa-mali yoNyaka namhlanje kwaye usivumele ukuba siqhubeke sibonelela abantwana kwindawo esihlala kuyo ekhuselekileyo, nebandakanyayo yokufunda ngokudlala.
Cofa apha ukuze unikele kwiNgxowa-mali yethu yoNyaka.
Akukho Mnikelo umncinci kakhulu
Ukunceda ukunciphisa ukudodobala koqoqosho okubangelwe sisibetho se-coronavirus (COVID-19), iCongress yenze umthetho wokuba UMthetho woNcedo lweCoronavirus kunye noMthetho woKhuseleko lwezoQoqosho (CARES Act). Abahlawuli berhafu abangenzi nto ngoku banokutsala ukuya kuthi ga kwi-300 yeedola ngonyaka kwiminikelo yesisa. Utsalo olunjalo kufuneka lube: yimali, kwaye lunikwe a 501(c)(3) isisa sikawonke-wonke . Yenza impembelelo kubomi babantwana abakumazantsi mpuma eNorth Carolina ngesipho sakho esilula sexesha elinye
Yenza inkumbulo ehlala ihleli
Xhasa iMyuziyam yaBantwana yaseWilmington kwaye wonwabele iprojekthi yosapho eyonwabisayo. Iimali ziya kunceda ukuphuhlisa inkqubo yethu yezemfundo. La maplanga akhethekileyo, ayilwe aza apeyintwa lusapho lwakho, aya kuboniswa ngokucacileyo kwiMyuziyam. Iiplanga zizi-6" x 48" kunye neyakho ukukrola, ukutshisa iinkuni, okanye ukuhombisa. Iindleko: $500.
Inkqubo yokuNika yeNyanga
Ukupha kwenyanga yindlela elula nefanelekileyo yokwenza umahluko kubomi babantwana bendawo. Le yindlela engenazinkathazo, itsalelwa irhafu, ekhuselekileyo, nekhuselekileyo yokuxhasa iMyuziyam yaBantwana. Abaxhasi banokukhetha ukuxhasa iinkqubo zethu zokufikelela, ubugcisa, ukuFunda nokuBhala, okanye iinkqubo ze-STEM.
Nika isipho sobulungu kusapho lwasekuhlaleni oludingayo. Nge-$155 nje kuphela, unganika usapho oluphantsi kwezixhobo ubulungu bosapho lwe-Adventurer kwiMyuziyam. Obu bulungu bubonelela ngokwamkelwa okungasikelwanga mda (2) kubantu abadala ababiziweyo kunye nabo bonke abantwana abasendlwini.
Yenza umnikelo ngembeko okanye inkumbulo yomntu omthandayo. Ngokuxhasa iMyuziyam yaBantwana yaseWilmington, unethuba lokuhlonipha umntu okhethekileyo okanye ukunika imbeko komnye umntu ngokwenza umnikelo wesikhumbuzo apho unokunceda khona ukwenza umahluko kubomi babantwana.
Yiba liLungu leNkampani
Lonwabela izibonelelo zeMyuziyam kubasebenzi bakho kunye neshishini, ngelixa ubuyisela kubantwana bendawo enkulu yaseWilmington ngaxeshanye!
Cofa apha ukuze ube lilungu loshishino.
Cinga ngokuba nomboniso obizwa ngokuba yimbeko okanye inkumbulo yomntu omthandayo. Icwecwe elibonisa umntu okanye igama losapho liya kubekwa kumboniso. Igalelo lakho le-$5,000 liya kunceda ukugcina nokwandisa le kunye neminye imiboniso kwiMyuziyam.
Ukunika okucwangcisiweyo kunceda abanikeli bafumane indlela yokwenza izipho zesisa ngoku nasemva kobomi babo, ngelixa benokubonelela ngezibonelelo zemali kubo nakwabo babathandayo. Ngokungafaniyo neminikelo eyimali, iminikelo yokunikela ecwangcisiweyo idla ngokukhutshwa kwii-asethi ezikwilifa lomnikeli kunengeniso enokulahlwa. Shiya ilifa kunye nezipho ezicwangcisiweyo.
Isipho esiMatanisa kunye nokuNika isitokhwe
Ngolwazi oluthe vetshe nceda uqhagamshelane
UMlawuli oyiNtloko, uHeather Sellgren kwi hsellgren@playwilmington.org .
Enkosi ngokwenza umahluko kubomi babantwana abakumzantsi-mpuma weNorth Carolina.
Yiba yinxalenye yoluntu olunceda abantwana bafunde.
Kutheni kufuneka uxhase i-CMoW?
Nantsi into esivumele ukuba siyenze isisa sabaxhasi:
Ufike abantwana abangaphezu 2,000 phesheya Brunswick, New Hanover kunye Pender Counties, ngeenkqubo zethu zokufikelela ezo ezijoliswe ukukhonza ezininzi fanelwe ulutsha kwindawo yethu
Yongezwe iziqwenga ezine ze-STEM ezisekwe kwi-Air, i-Flight Tube, i-Air Harp, kunye ne-Magnetic Ring Launcher.
Kuthengwe i-Smartboard entsha kunye nee-ipads ukuze zisetyenziswe kwezinye zeenkqubo zethu zemfundo
Okungabonwanga kangako, kodwa kubaluleke ngokulinganayo, ibe kukutshintshwa kweeyunithi ezintlanu zokufudumeza/AC kunye nokufakelwa kwenkqubo entsha yolondolozo lwembali ebanzi.
UAvery M. kunye noEmma M.
"Kamsinya nje xa singena eminyango, kukho imvakalelo yosapho njengoko sibuliswa ngegama kunye nonxibelelwano lokwenyani. Ukufudukela kwisixeko esitsha ekuqaleni kwesibetho esizimele, oku kuyimvakalelo exabiseke kakhulu kum kunye nentombi yam. Intombi yam iyakuthanda ukukhaba ixesha layo ngeKlasi yobuGcisa kunye noNksz. Enkosi ngokungasivuli nje iingcango zakho ukuba sidlale, kodwa ekudaleni indawo apho siziva sixatyisiwe kwaye siyinxalenye yento enentsingiselo kuluntu. ” - U-Emma M.
"Ndiyithanda kakhulu itafile yeLego kuba imnandi kakhulu. Ndiyayithanda into yokuba ukwazi ukwakha izinto emanzini. Ndiyayithanda nesitulo sokuphakamisa kunye neofisi kagqirha wamazinyo kuba uyakwazi ukucoca amazinyo azenzisayo kwaye inesitulo samazinyo sokwenyani. Ndiyabuthanda ubugcisa ngolwesiHlanu kuba sifika sipeyinta kwaye ngamanye amaxesha senze into ngeengxowa zephepha, kukho izinto ezichulumancisayo kwigumbi lobugcisa elisecaleni.Umntakwethu uyamthanda kakhulu igumbi lomntwana omncinci kuba uthanda iidinosaur kwaye lineedinosaurs kulo. -Avery M.
"Mna nomyeni wam ekugqibeleni sakwazi ukuzisa intombi yethu kutyelelo lwakhe lokuqala kwaye, owu Nkosi yam, ndandichukumisekile (kwaye wayenjalo). Wayethanda kakhulu isilayidi, idayinaso kunye nendawo yokudlala kwi-Toddler Treehouse kunye nencinci. itonela ngaphandle, kodwa sonwabele oololiwe bokudlala kunye nokhukuliseko lomhlaba/ummandla wetafile yamanzi. Nonke nenze uhlaziyo olumangalisayo/uphuculo; wonke umntu olapho ufanelwe yimbeko enkulu ngokufumana okuhle kulo nyaka uphambeneyo." -Ongaziwayo